Cinegif: Design Cinemagraphs sy Animated Gifs Martech Zone
Asabotsy, Septambra 21, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Na dia tsy lalaovin'ny mpanjifa mailaka maoderina aza ny horonantsary dia azonao atao ihany ny misarika ny sain'ny mpihaino anao amin'ny sary mihetsika gif. Ny gif manan-tantara noforonina tsara dia afaka mampitombo ny anao mailaka tsindrio mailaka amin'ny tsindry indroa ary mijery mahafinaritra izy ireo eo amin'ny tranokalano antonony nefa tsy mandroaka ireo mpitsidika. Ny mpitsidika dia tsy zatra mahita hetsika miafina amin'ny sary ao anaty na manodidina ny tranokala raha tsy manindry bokotra milalao izy ireo.
Ny fanontaniana ho an'ny mpamorona dia ny fomba fandehan'ny olona manao azy? Azonao atao ny mampiasa fitaovana toa ny Photoshop ary mamorona ny sary mihetsika amin'ny fisintonana sary avy amin'ny horonantsary… saingy mety mitaky asa kely izany. Eo no idiran'ny Cinegif - sehatra iray namboarina manokana hamoronana gif animated.
Ny fetra tokana amin'ny sehatra Cinegif (antenaiko fa ovain'izy ireo) dia ny halavany hatramin'ny 600 piksela ny sakany ary 600 piksela ny halavany.
Raha ny momba ny tranonkala dia azo ampiasaina ao amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny Twitter sy Google+ (fa tsy Facebook… booo) ny gif animated. Google+ dia mamela azy hanao hetsika sy sary manafina mihitsy aza. Animated gifs dia miasa ao amin'ny PowerPoint sy Keynote… manatsotra ny famelabelaranao manaraka. Ary rehefa lasa be mpampiasa kokoa ny MMS, azo alefa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra iOS sy Android ihany koa ny gifs animated!
Azonao atao koa ny mividy tahiry Cinegifs.
Tags: sary mihetsika gifAnimationcinegifcinemagraphGIF